Updated News in Nepali from all over the world at : http://nepali.reaknlinks.com. यशोदाको संघर्षको कथाः सामान्य गृहणीदेखि सफल महिला उद्यमीसम्म (भिडियोसहित)
बिमला गुप्ता/ वीरगंज
स्कुलदेखि कलेज। अफिस फाईलदेखि लगेज ब्यागसम्म तयार हुन्छ यशोदा ब्याग तथा रेडिमेड उद्योगमा। जसको सञ्चालिका एक गृहणी महिला हुन्। जो आज एक सफल उद्यमी महिलाको नामले परीचित छिन्।
यशोदा ब्याग तथा रेडिमेड उद्योगकी सञ्चालिका यशोदा गजुरेल एक उद्यमी महिला मात्र नभई आफ्नो समुदायको लागि उदाहरणीय पात्रसमेत हुन्।
अनावश्यक खर्च नगरी बचत गर्ने बानीले उनलाई औद्योगीक नगरी वीरगन्जमा एक उद्यमी महिलाको रूपमा स्थापित भएकी छन्।
चितवनकी यशोदा १० वर्षअघि विरगन्जको घडिअर्वामा विवाह गरेर आइन्। २ सन्तानकी आमा यशोदा विगत डेढ वर्षदेखि आफ्नै उद्योग सञ्चालनमा ल्याएकी छन्।
घरकी एक्ली बुहारी भएपछि घर खर्चको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यशोदाकै काँधमा थियो। उनका श्रीमानको पनि ब्याग कारखाना छ।
‘सामान्य परिवार भए पनि घरमा खान लाउनको कमी थिएन। म श्रीमानको कमाईमा रमाउनुभन्दा पनि आफ्नै कमाईमा रमाउन चाहन्थे,’ उनले बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै भनिन्,‘एक महिला भएर आफू पनि पुरूष सरह केही गर्न चाहन्थेँ। तर, कसरी गर्ने? बुहारी भएकोले सम्भव थिएन। यद्यपी म केही गरेरै छोड्छु भन्नेद मनमा दृढ विश्वास थियो।’
श्रीमानले दिएको घर खर्चको पैसाबाट दिनहुँ थोरै भए पनि सहकारीमा खाता खोलेर बचत गर्न थालिन्। निरन्तरको बचतले उनको खातामा ६ वर्षको अवधिमा १ लाख रूपैया जम्मा भयो।
त्यसपछि यशोदाले आफ्नो श्रीमान समक्ष आफू पनि ब्याग उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखिन्। श्रीमान पनि समझदार थिए। श्रीमतिको भावनालाई बुझ्दै ब्याग उद्योग सञ्चालनका लागि २ लाख रूपैयाँ थपिदिए।
यसरी ३ लाखको लागतमा सुरू भएको यशोदा ब्याग उद्योगको पूँजि अहिले डेढ वर्षको अवधिमा २५ लाख पुगेको छ।
विवाह गरेको ३ वर्ष मै २ सन्तानकी आमा भएपछि यशोदा घरमा फुर्सतको समयमा खालि बस्नुभन्दा जागिर गर्ने सोच बनाएकी थिइन्। तर भनेजस्तो बाहिर काम पाउन सहज थिएन। बाहिर काम नपाएपछि यशोदाले श्रीमान कै उद्योगमा गई ब्याग बनाउने सिप सिक्न थालिन्।
घरको काम सकेर दिनहुँ श्रीमानकै उद्योगमा कालिगढसँग मिलेर काम गर्न थालिन्। आफू घरमा नहुँदा बच्चाको देखभाल सासु आमाले गर्नाले उनलाई ढुक्क थियो।
‘सासु र बुहारी आमा छोरी जस्तै मिल्ने भएकाले घरको काममा खासै गाह्रो भएन। एक अर्काको भावना पनि बुझ्थ्यौं,’ उनले भनिन्, ‘तर बुहारीलाई घर भित्रै बस्नुपर्ने पुरातन सोच भएको मधेशको समुदायमा घर भन्दा बाहिर निस्केर काम गर्न सहज थिएन। घर परिवारले साथ दिए पनि बाहिर निस्कदा छिमेकीले अनेकन कुरा गर्थे। किन बुहारीलाई काम गर्न बाहिर पठाएको होलान् भन्ने कुरा गर्थे?’
सामान्य किसान परीवारमा जन्मिएकी यशोदा सानैदेखि कामप्रति चनाखो थिईन्। उद्योग सुरू गर्दा सुरुमा श्रीमानको सहयोग पाए पनि अहिले भने उद्योगभित्रको कामदेखि बाहिरी कामकाजसम्म यशोदा आफैं गर्छिन्।
अहिले यशोदाले गरेको काम उदाहरणीय भएको भन्दै आलोचना गर्ने छिमेकि प्रशंसा गर्न थालेका छन्। सुरूमा आफूलाई जागीर नदिने व्यक्तिहरू आज आफ्नो उद्योगमा आएर चिनजानको व्यक्तिलाई काममा लगाईदिनु भन्दा उनको हौसला झन बढेको छ।
यशोदा अहिले आफ्नो काममा निकै व्यस्त हुन्छिन्। उनको व्यापार पर्सामा मात्र सिमित नभई पूर्व झापादेखि पश्चश्चि कैलालीसम्म पुगेको छ।
उनकै मेहनत र परिश्रमले पहिलेभन्दा अहिले घरको आर्थिक अवस्था पनि सुधारिएको छ।
‘श्रीमान र घर परिवारको साथ सहयोग पाएरै म एक उद्यमी महिलाको रूपमा परिचित हुनुका साथै मेरो हिम्मत पनि बढेको छ’, उनले भनिन्, ‘उद्योग खोल्नु मात्र ठूलो कुरा होईन आफूले जानेको शिप प्रयोग गरी बजार व्यवस्थापन गर्नुनै अहिलेको मुख्य चुनौती हो।’
व्याग व्यवसायमा पनि प्रतिश्पर्धा बढिरहेकोले उनी अहिले घरभन्दा पनि उद्योगलाई बढी समय दिइरहेकी छन्।
सुरूमा ५ वटा मेसिनबाट सञ्चालन गरिएको उद्योगमा अहिले ७ वटा मेसिन छन्।
पर्सेली महिलाद्धारा सञ्चालित उद्योग मध्ये यशोदा ब्याग उद्योग उत्कृष्ट सूचीमा परेकोले अहिले नेपाल सरकारबाट १२ लाख रूपैया सहुलियत कर्जासमेत पाएकी छन्।
‘सरकारबाट पाईने सेवा र सुविधाले गर्दा अहिले उद्यमी महिलाको हौसला बढेको छ। करमा छुट र बेला बेलामा सरकारद्धारा सहुलियत कर्जाले गर्दा महिलालाई उद्यमी बन्न उत्प्रेरित गरेको छ’, उनले भनिन्,‘जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक परिवर्तन आउनुको साथै बेरोजगारीको समस्या पनि हट्दै गएको छ।’
महिलामा दृढ इच्छा शक्ति र कामप्रति लगनशिलता भए हरेक क्षेत्रमा महिलाले सफलता पाउने उनले दाबी गरिन्।